Inhloko zeNdaba Ntulikazi 03, 2019
****** Uzulu usekhetha ukuba atshintshe imali yakhe yakwamanye amazwe emabhanga ngoba esipha imali ephezulu nxa uqhathanisa lalabo abathengisa imali phandle. Kodwa abanye baveze ukudana ngoba bethi emabhanga kuhlala kulodwendwe olude njalo abasebenzi kuhle labantu.
********** Abakhubazekileyo bakhuthaza uzulu wonke jikelele ukuba abowahlonipha amalungelo abo njengaye wonke umuntu bethi ngoba esephulwa mihla yonke kunhlangothi zonke jikelele.
********** Uhulumende ubikwa ezangezelela imali ephiwa abalwa impi yenkululeko ngesikhathi umumo womnotho ungamanga kuhle elizweni.
************ Ngesikhathi kulovalo olukhulu ngesimo esibi kwezomnotho weZimbabwe, uhulumende wesabelo seGauteng esihlala abakwamanye amazwe abanengi, inengi labo kungabeZimbabwe, usekhuthaze ukuthi kwengezwe imizamo yokwenqabela abangena elizweni ngokungekho emthethweni.
********** KuLiveTalk namhlanje kuhlelo olwe “Diaspora Forum” sikhangela impilo yabeZimbabwe asebehlala eSouth Africa asebehlalela evalweni ngemva kwenkuthazo kahulumende weGauteng yokuqinisa imizamo yokwenqabela abangena elizweni ngokungekho emthethweni. Nxa lifuna ukungena kuhlelo thumelani imlayezelo kunombolo ezithi 0012024650318. Lingakhuthwa yilezindaba lezinye kuStudio 7 ngo half past 7 ntambama lango half past 6 ekuseni, kumagagasi athi 909 am, 4930, 15580 laku 6080 kilohertz kuShortwave.